Abaphezulu abahlanu abaGqwesileyo beECN ngoJanuwari 5 | Iinkonzo kunye neNgxowa-mali ayityhilwanga
Abadayisi abahlanu abaphambili be-ECN bango-5
Abarhwebi abaGqwesileyo beECN? Njengoko uyazi, imarike ye-forex yenye yezona ndawo zorhwebo kakhulu kulwelo emhlabeni. Kodwa, ukhe weva ngenkqubo ye-elektroniki ethatha urhwebo lwehlabathi ngesiqhwithi?
I-ECN, esisigama soNxibelelwano loNxibelelwano lwe-Elektroniki, yenza ukuba wena njengomrhwebi ukwazi ukukhuphisana neqela elikhulu kakhulu lamaziko emali kwintengiso.
Ngenxa yale nkqubela phambili yetekhnoloji ngaphakathi kwinqanaba lezemali, inani elikhulu labarhwebi be-forex baqala ukusebenzisa le nkqubo ifikeleleke ngakumbi- i-ECN. Beka ngamagama alula, le nkqubo ivumela ii-ECN brokers ukuba zenze urhwebo kuthungelwano olusetyenziswa ngabathengisi abaninzi be-forex.
Kulabo bathengisi abanakho ukubandakanyeka njengoko bebefuna ukubakho ngexa leeyure zentengiso, okanye abo bafuna nje ukwahluka ngakumbi-Abarhwebi be-ECN balungile. Emva kwayo yonke loo nto., Ngubani ongafuniyo ukusasazeka okungaphaya kunye namaxabiso asezantsi ekhomishini?
Thina kwi-Funda i-2 yoRhwebo siye sahlanganisa isikhokelo kubathengi be-ECN, esiza kugubungela iziseko ze-ECN, inani leengcebiso eziluncedo malunga nento onokuyijonga, kwaye kunjalo- best ECN brokers phandle apho ukuqwalaselwa kwakho.
€ 10 (0.0001 amaqashiso)
Ababoneleli aba-4 abafana nezihluzo zakho
Iipesenti ezingama-79 zeeakhawunti zotyalo mali zilahleka xa kuthengiswa iiCFD kunye nalo mboneleli.
Yintoni i-ECN Broker?
Ngamafutshane, xa kufikwa kurhwebo lweemali zamanye amazwe, kugxilwe kukwenza inzuzo eninzi ngangokunokwenzeka, kwaye rhoqo kangangoko kunokwenzeka. Kwi kwimarike Forex Zimbini iintlobo eziphambili zabarhwebi. Okokuqala, sinayo Abarhwebi be STP; emele 'ngokuqhubekeka ngokuqhubekekayo'. Lo 'ngumntu ophakathi' oya ngapha nangapha phakathi kwabanikezeli bemali kunye nawe (umrhwebi).
Okwesibini, emva koko unabarhwebi be-ECN, abenza ijelo lokunxibelelana ngokuthe ngqo phakathi kwakho (umrhwebi), kunye nababoneleli beeasethi zorhwebo (ababoneleli bemali). Eyona nto ibeka umrhwebi we-ECN ngaphandle komrhwebi wemveli kukusetyenziswa kwenkqubo ye-ECN.
Le nkqubo yenza ukuba abathengisi kunye nabathengi ngaphakathi kotshintshiselwano bakwazi ukufumana umdlalo kwizikhundla zabo zokurhweba, ke njengomrhwebi, uya kuba nokufikelela kwamanye amahlakani amaninzi kwiimarike zemali ngokusebenzisa olu hlobo lomrhwebi kurhwebo.
Ukukhanya kwenyani yokuba idibanisa amaxabiso amaxabiso ezinto ezinxulumene nabathengisi, umrhwebi we-ECN unokuhlala ekubonelela ngokusasazeka kwe-bid-bid kunye nexabiso lekhomishini elingcono. Okungakumbi kamva.
Zithini izibonelelo zabarhwebi beECN?
Ukuze ufikelele Forex yorhwebo kwimarike, kuya kufuneka kuqala ufumane umthengisi ofanelekileyo. Kungenxa yokuba i-forex ayenziwanga ngendlela efanayo nezabelo kunye nezinye iiasethi, kwaye urhwebo lwe-forex alunakuthengiswa ngokufanayo.
Kuxhomekeka ekubeni yeyiphi i-broker oyisebenzisayo, unokufumana ukufikelela kwizikhundla ezahlukeneyo zokurhweba kunye namaxabiso otshintshiselwano. Ukukhetha iqonga elilungileyo lohlobo lomrhwebi oluyimfuneko kubalulekile ukuba ufuna ukuba ngumrhwebi we-forex onenzuzo, kwaye kulapho abathengisi be-ECN abalungileyo banokukunceda khona.
Soloko uqala ngokuqinisekisa ukuba umthengisi we-ECN omkhethileyo, okanye ujonge kuye, unelayisensi epheleleyo kwaye ulawulwa. Uya kufumanisa ukuba uninzi lwabarhwebi babhalise ngaphezulu kolawulo olunye, ngamanye amaxesha uninzi. Kananjalo, oku kuza nolunye ukhuseleko kwimali yakho.
Kanye nokuqinisekisa ukuba umthengisi wakho we-ECN ulawulwa ngokupheleleyo, kuya kufuneka usoloko ujonga ukuba ibonelela ngohlobo olululo lweeakhawunti zokuthengisa kunye namaqonga akho. Ekupheleni kosuku, oku kukhetho lomntu kwaye kuya kuxhomekeka kwisitayile sakho sokuthengisa.
Ezinye izinto ezimbalwa ekufuneka ziqwalaselwe kukufikeleleka kwezalathi zobuchwephesha, iimeko zorhwebo, ubuncinci bediphozithi efunekayo, iindlela zokuhlawula ezivumelekileyo, iiperi zemali ozikhethileyo, kwaye ke zisasazeka.
Umthengisi we-ECN vs uMenzi weNtengiso
Ngaphambi kokuba sijonge umahluko phakathi kwezi zimbini, kufuneka kuqala siqonde ukuba yintoni 'umenzi wentengiso'? Ukubeka ngokulula, umenzi wentengiso sisiseko somrhwebi obeka amaxabiso okucela kunye nebhidi ngokusebenzisa inkqubo yabo. Kwezinye izangqa, oku kubizwa ngokuba 'kukwenza iimarike'.
Abatyalomali ke banakho ukuvula nokuvala indawo yokurhweba kwimarike emva kokujonga amaxabiso kwiqonga lomenzi wentengiso. Ngokubanzi, abenzi beemarike ababeki zikhundla zabaxhasi kunye nabaphi na abanye ababoneleli ngemali. Kwesinye isiphelo sebala, abarhwebi abaphambili be-ECN benza. Umrhwebi wentengiso uya kuphulukana nomthengi xa efumana indawo yokuphumelela kuba isikhundla sokuphumelela sihlawulwa kumthengi ngaphandle kweakhawunti yomenzi wentengiso.
Njengoko sigubungele ngasentla, abarhwebi ababalaseleyo be-ECN bahlukile kubarhwebi bemakethi, ikakhulu ngenxa yokuba bevumela amaxabiso avela kubanikezeli bemithombo eyahlukeneyo kwaye bayakwazi ukukhuphisana kwifandesi efanayo.
Ngokungafaniyo nabarhwebi bemakethi, amaqonga orhwebo e-ECN enza inzuzo ngokuhlawulisa ikhomishini esisigxina kwindawo nganye. Oku kuhlala kungenxa yomthamo omkhulu wabathengi, kwaye iikhomishini ze-ECN kunye neefizi zinokuba sezantsi xa kuthelekiswa.
Kutheni ndifanele ndirhwebe kunye nomthengisi we-ECN?
Ukuba awusele uthengisiwe ngeli nqanaba, ukurhweba ngababini be-forex ngomthengisi we-ECN kuqinisekisa ukuba ujwayelene neempawu ezahlukeneyo kunye nezibonelelo ezingafumaneki.
Xa isiseko sobugcisa sisebenza ngokuchanekileyo, ungaqala ngokurhweba kwangoko, kwaye ngaphandle kokulinda omnye umntu.
Kutheni Abarhwebi abaGqwesileyo be-ECN bemi ngaphandle kwesiXuku
Njengoko sigubungele umahluko phakathi kweentlobo ezimbini eziphambili zamaqonga asetyenziswa ngabarhwebi be-forex, ngoku siza kuphonononga ukuba yintoni eyenza ukuba abarhwebi be-ECN babonakale ngokuchasene nokhuphiswano.
Akukho Rhwebo ngokuchasene nabathengi balo
Kwaye kunye nokuzisa kunye neendidi zabathathi-nxaxheba kwintengiso, i-ECN broker inguthethathethwano phakathi kokuthengisa kunye nokuthenga iiodolo. Ngokwemigaqo kaLayman, oku kuthetha ukuba umrhwebi uya kwenza njalo ze yorhwebo ngokuchasene nendawo yakho. Kwelinye icala, ii-STP broker ziye zaziwa ngokurhweba ngokuchasene nabathengi bazo ngokuvula izikhundla eziphikisanayo.
Umzekelo woku ingangowokuba wena njengomrhwebi uvule indawo yokuthenga (ende) kwi-GBP / USD, emva koko umthengisi we-STP unikezela eso sikhundla kumboneleli wemali. Kodwa, into ongayaziyo kukuba i-STP broker inokuvula indawo yokuthengisa (emfutshane) kwi-GBP / USD. Ngamanye amagama, oku kuchasene ngokupheleleyo nesikhundla sakho kwaye ke -ukungqubana okukhulu komdla.
Nangona oku kunokubonakala ngathi yinto encinci, isizathu sokuba i-STP broker iyakwenza oku kukuba ukuba ulahlekile kwi-GBP / USD yakho yorhwebo olude, umrhwebi uzuza intlawulo. Kodwa, ukuba kwelinye icala ubuya win, umrhwebi uza kuphulukana nemali yakhe. Kananjalo, isenzo sokurhweba ngokuchasene nawe sisipele somthengisi.
Njengoko sele sigubungele iinkcukacha, abarhwebi abaphambili be-ECN abayiliwanga ukuba bangenise izikhundla zakho kubo nabaphi na abanikezeli ngeempahla. Endaweni yoko, unokukwenza ngokwakho
Ukurhweba nge-ECN kwandisa ukungafihli
Uthungelwano luyafikeleleka kubathengisi abaninzi be-forex, ke kuhlala kusithiwa i-ECN forex brokers iququzelela iimeko ezinomtsalane ngakumbi kurhwebo. Sebenzisa i-ECN broker ngokuqinisekileyo kunciphisa ukuxhaphaza amaxabiso kwaye kudala ukuthembana okungaphezulu kunabanye abathengisi bemveli. Oku ikakhulu kungenxa yokuba ayizibekeli eyayo buza kwaye ibiza amaxabiso.
Abarhwebi beECN bavula iingcango zorhwebo kuyo yonke inkqubo ye-ECN okanye abatyali zimali be forex. Ngokukuhlawulisa umyinge wekhomishini oguqukayo (endaweni yokulungiswa) kwintengiselwano epheleleyo, uya kufumanisa ukuba ukusasazeka kunikezelo kuphantsi kakhulu kunabarhwebi abaqhelekileyo. Njengamaxabiso achanekileyo, abarhwebi abaphambili be-ECN bakwanikezela abathengi ngamanani embali yamaxabiso, kunye neendaba ezikhoyo nezangoku zezezimali.
Ngokubonisa amaxabiso kunye nomthombo, abarhwebi bayakwazi ukurhweba kwangoko kwaye basebenzise ukusasazeka okuqinileyo. Ngaphezulu kwesiqinisekiso esikhawulezileyo, uya kuba nokufikelela ngokubanzi kwezi khomishini zisezantsi zikhankanyiweyo kwaye usasaze abathengisi beECN. Ukufikelela kwezi zicaphulo zokwenyani kuya kukunceda ekuphepheni oko kubizwa ngokuba 'ziicaphulo eziphindiweyo'.
Kwabo abangaziyo, iikowuti ziphinda zenzeke xa i-odolo yorhwebo ikhatywa ngenxa yotshintsho kwixabiso le-asethi onqwenela ukutyala kuyo. Okwangoku, umrhwebi uphinda-phinda ii-asethi ekuthethwa ngazo. Isicatshulwa kwakhona asikaze sisebenzele wena ukuze sibe nefuthe elibi kwintsebenzo yakho yorhwebo ekuhambeni kwexesha.
Abaphathi abaphambili esibhekisa kubo zi-STP broker. Xa uqala ukurhweba ufuna iinkampani ezininzi zonke zibonelela ngeasethi yorhwebo. ngaphandle kwaba babizwa ngokuba ngabanikezeli bemali, ukuthengisa bekungayi kubakho. Ngokubanzi, ababoneleli bemali kunye nabarhwebi bathambekele ekunxibelelaneni ngokuthe ngqo. Ngale nto, kukho 'abaphakathi'. Ngamagama alula, indima yabo kukutshatisa omabini amaqela orhwebo kwindawo enye yokusebenza.
Xa urhweba nomthengisi we-ECN, akukho mntu waziyo ukuba ungubani. Isibonelelo esithile sokungaziwa kukuba urhwebo lusekwe kwiimeko zentengiso eziyinyani kunye namaxabiso angathathi hlangothi.
Ukusebenza ngokuthe ngqo kweNtengiso
Abarhwebi abaphambili be-ECN baququzelela izikhundla ngokuqhutywa ngokuthe ngqo kwintengiso. Oku kuthetha ukuba abarekhodisi indawo yomrhwebi kwaye bazame ukubaxhuma kubaboneleli bemali. Oko kukuthi, abarhwebi abaphambili be-ECN abazenzi iikowuti zabo. Endaweni yoko, basebenzise ababoneleli abahlukeneyo bokufumana amaxabiso abo kwaye banokuthetha-thethana ngokwabo.
Olu hlobo lomrhwebi lunokubangela umdla ikakhulu kubatyali mali abajonge ukwenza intengiselwano enkulu, kuba aba barhwebi banika abatyali mali ukungaziwa ukuba bayayifuna.
Masicinge ukuba uvula indawo kwindawo ye-GBP / USD (nge-1 lot).
Endaweni yokuba umrhwebi wakho athethathethane ngesikhundla kunye nomboneleli wemali, iqonga le-ECN likuvumela ukuba uthethathethane nomnikezeli we-GBP / USD ofanelekileyo osebenza eqongeni ngokwakho.
Kungenxa yesi sizathu, ukuba iiasethi zithathwa njengezinto ezingamanzi, njengoko umntu ophakathi ethathiweyo ekhutshiwe kwaye akukho mntu ungena endleleni yamaqabane orhwebo. Ngokubalulekileyo, yNjengomrhwebi uyakwazi ukuthenga okanye ukuthengisa ngababini bemali phantse kwangoko kunye nomnikezeli wenkonzo yokuthengisa.
Ukuqina kweBhidi-Buza ukusasazeka kwiimarike ze-ECN
Njengoko besichukumisile ngaphambili, abona bathengisi babalaseleyo be-ECN ngokuyintloko zizixhobo ezahlukileyo ezahlukileyo kwimarike Forex abathengisi. Ezi zinokuba yiyo nantoni na evela kwiingxowa-mali zotyalo-mali (ngenye indlela ezaziwa ngokuba ziihedge fund) ukuya kwiibhanki zorhwebo. Kuba baninzi abathathi-nxaxheba kwindawo yentengiso, kuya kuhlala kukho umahluko xa kufikwa kumaxabiso acatshuliweyo-amaxabiso aphezulu kunye naphantsi-wokubuza.
Abanye ababoneleli ngetyala banokuba nebhidi ephezulu kodwa amaxabiso abuze asezantsi, akhokelela ekusasazeni okuqinileyo. Nangona kunjalo, abanye ababoneleli baya kuba namaxabiso aphantsi okubhida, kodwa amaxabiso aphezulu abuze, akhokelela ekusasazeni okukhulu. Njengomrhwebi, uyakwazi nokuthenga isibini semali ngexabiso eliphantsi ukusuka kumnikezeli omnye, kwaye uyithengise kumnikezeli weempahla ezahlukileyo ngokungaphezulu. Olu luhlobo loncedo abanye abathengisi abangalunikeliyo.
Ii-asethi ezininzi ziyafumaneka
Kukho iindidi zee-asethi ezahlukeneyo ezikhoyo ngakubarhwebi ababalaseleyo be-ECN, kwaye ezi zihlala zihlala ngolu hlobo lulandelayo:
Ukuqwalaselwa xa ukhetha ukuKhangela ii-ECN Brokers eziGqwesileyo
Inani labarhwebi be-ECN abakhoyo liyonyuka unyaka nonyaka. Eyona nto inokwenzeka, oku kungenxa yokuba intengiso ayisekwanga embindini, kwaye ke abathengisi banokufikelela kwiindidi ezininzi zeemeko zokurhweba kunye namaxabiso otshintshiselwano. Oku kunomdla kakhulu kubarhwebi nakubarhwebi ngokufanayo.
Njengoko bekutshiwo ngaphambili, i-ECN brokers inokuthi ithathelwe ingqalelo ngokubonakalayo kubatyali mali abafuna ukwenza intengiselwano enkulu kakhulu, kuba aba barhwebi banika abatyali mali ukungaziwa.
Ngale nto ithethwayo, ngaphambi kokuba uthathe isigqibo sokuba yeyiphi i-ECN broker efanelekileyo kuwe, kukho izinto ezimbalwa ekufuneka uqiniseke ngazo kuqala-esidwelise apha ngezantsi.
Ngaba zilawulwa ngokupheleleyo?
Kubalulekile ukuba umthengisi we-ECN omkhethileyo ahlangane ubuncinci kwimigangatho yemizi-mveliso. Ikwangumbono olungileyo ukuqinisekisa ukuba umthengisi unobukho kwilizwe ohlala kulo, kuba oko kuthetha ukuba uya kulawulwa yinkqubo yezomthetho efanayo. Oku kunokwenza izinto zibe nzima kakhulu xa izinto zingayi kwisicwangciso.
Umrhwebi ngamnye wase-UK unyanzelekile ngokusemthethweni ukuba abambe FCA ilayisenisi (iGunya lokuZiphatha kwezeziMali). Xa usebenzisa umthengisi onelayisensi ngokupheleleyo unokuqiniseka ukuba ukhuselekile ngeendlela ezahlukeneyo zokhuseleko ezimiselwe ngumthetho wase-UK / EU.
IiNgxowa-mali zaBaxhasi ezahluliweyo
Sibonise ngaphambili ukubaluleka kokukhetha umrhwebi onelayisensi ngokupheleleyo nolawulo. Unokuba nomdla wokwazi ukuba enye inzuzo yelayisenisi kukuba uya kuhlawulwa yi-IPS, emele iSikimu soKhuselo lwaBatyali.
I-IPS iqinisekisa ukuba zonke iimali zakho zahlulwe kwiimali zabarhwebi. Abanye abathengisi benza iakhawunti nganye ngegama lenkampani, kodwa bamba imali yakho ngokwahlukeneyo. Ngamanye amaxesha, abarhwebi banokwenza iakhawunti egameni lakho kwaye bagcine imali yakho apho.
Kuxhomekeka kwinqanaba lokhuselo lwengxowa-mali oku kuyakukunika uxolo lwengqondo kwimeko yelishwa yomrhwebi oyokungabinamali. Kungenxa yokuba imali yakho ayizukuhlanjwa ngetyala lomthengisi.
Ikhomishini kunye nokusasazeka
Abahwebi bahlala bezibuza ukuba yintoni eyenza ukuba umthengisi we-ECN asasazeke kakhulu. Njengoko sele sigutyungelwe kwesi sikhokelo, inyani elula kukuba badibanisa uninzi lwabanikezeli bemali kunye kunye nexabiso lamaxabiso.
Ukhetho lwakho lokukhetha ukubuza ixabiso luza kuba lukhulu, kwaye ewe, kuya kubakho abanikezeli ngeempahla ezibonelela ngexabiso eliphezulu lokubhida kunye namaxabiso asezantsi okubuza. Kodwa, kuya kubakho ababoneleli abanikezela ngamaxabiso asezantsi ebhidi kunye namaxabiso aphezulu okubuza.
Nokuba yeyiphi indlela, ubuncinci unokukhetha okungcono onokukhetha kuzo, ubuncinci kuba iikowuti zihlala ziqokelelwa ngumrhwebi we-ECN omnye.
Zininzi iindlela onokuxhasa ngazo iakhawunti yakho yorhwebo ye-ECN, nangona kunjalo, iqonga ngalinye lomthengisi liya kwahluka kancinane.
Abarhwebi abagqwesileyo be-ECN banikezela ngeendlela ezahlukeneyo zokuhlawula abanokukhetha kuzo. Olona khetho luqhelekileyo lokuhlawula zezi:
Amakhadi etyala kunye neebhanki; njenge-Mastercard kunye neVisa.
I-E-wallets; ezifana PayPal, Skrill kunye Neteller.
Izixhobo zokuRhweba ezisetyenziswa ngokuQhelekileyo kunye nezalathi
Uya kufuna ukuqinisekisa ukuba umthengisi we-ECN omkhethileyo unikezela ngeseti epheleleyo yezalathi zobugcisa. Oku kufuneka kubandakanya ukuthanda oku:
Ngokufana nawo nawuphi na umbutho okanye inkampani ojongana nayo, kuya kufuneka uyazi ukuba ungalindela inqanaba elifanelekileyo lenkonzo yabathengi.
Ngelixa abarhwebi be-ECN abaziwayo baneqela elikhulu lenkxaso kubathengi kubaxhasi bayo, enye yeendlela onokufumana ukuqonda ngayo kukujonga uphononongo olushiywe ngabanye abathengi. Ilizwi lomlomo yinto egcina abathengi bebuya.
Ngokwenyani, njengokukhanya kunye nomnyama uninzi lwezinto ezilungileyo ziza nezinto ezimbi ngokunjalo. Ngale nto engqondweni, kufuneka sikwazise ngezinye zezinto ezingalunganga ezinokuthi zihambisane nokuvula iakhawunti kunye nomthengisi we-ECN.
Abarhwebi beECN abathathi nkcitho njengentlawulo yenkonzo, ke baya kuba nemirhumo emiselweyo kunye nekhomishini kwintengiselwano nganye. Kuxhomekeka ekubeni zinkulu kangakanani na iikhomishini kunye nokuba yintoni uhlahlo-lwabiwo mali lokuthengisa. Ngamanye amagama, abathengisi be-ECN abanakulungeleka kwizibonda ezincinci zokurhweba, njengoko iingeniso zakho ezinokubakho ziya kutyiwa ziintlawulo zekhomishini ethe tyaba.
Iimfuno eziPhezulu zeDipozithi
Ukuze uvule iakhawunti kunye nomthengisi we-ECN, uya kufumanisa ukuba amaqonga alindele umrhumo ophezulu wedipozithi. Oku kuhla kwiindleko eziphezulu zenkonzo, kunye nenyani yokuba zikuvumela ukuba unxibelelane ngokuthe ngqo nababoneleli bemali.
Njengababoneleli bemali yokuthengisa amatyala banokuba neemfuno eziphakamileyo kunye neendleko zenkonzo, abathathi-nxaxheba ngamanye amaxesha banokubamba ubungakanani besikhundla seeyunithi zemali ezingama-10,000 (okanye iqashiso le-0.1) Oku kuthetha ukuba ngumrhwebi ukuba ufuna ukuvula indawo engaphantsi kweli nani, wena ayizukuvunyelwa ukuba.
Ngaba ndifanele ndisebenzise i-ECN Broker?
Abanye abathengisi bafumana amaqonga e-ECN kunzima kwaye kunzima ukusebenzisa, ke ukuba uqala nje kunokuba kungafanelekanga. Kananjalo, ukuba ngempela Ufuna ukurhweba nomthengisi we-ECN, kuya kuba kufanelekile ukwenza uphando lwakho kwaye ufunde ukuba isebenza njani kuwe.
Siyacinga ukuba okuhle kuyakudlula okubi, kwaye ngakumbi ukuba ufuna ukuxhamla ekusasazeni ngokungqongqo kwaye uvule izikhundla ezinkulu. Lilonke, ukuba unohlahlo-lwabiwo mali oluncinci, thina kuFundo 2 loRhwebo singacebisa ukubambelela kubarhwebi be STP okwangoku.
Ukungena kunye noMthengisi we-ECN-Indlela yokuKhokela
Ngoku uxhobile ngalo lonke ulwazi oludingayo kubarhwebi be-ECN, uyafuna ukuqala.
Okokuqala, ewe, kuya kufuneka uthathe isigqibo sokuba ngowuphi umthengisi we-ECN olungele iimfuno zakho. Njengoko baninzi abathengisi ngaphandle apho banokukhetha khona, kuhlala kucetyiswa ukuba uzenzele olwakho uphando ngaphambi kokuzibophelela ngokupheleleyo.
Inyathelo lokuqala -Fumana i-ECN Broker
Ngaba awuqinisekanga ukuba ngowuphi umthengisi we-ECN ohambelana neemfuno zakho? Ungakhathazeki, iqela lethu leengcali kwi-Learn 2 Trade libeke ndawonye uluhlu lwabarhwebi abaphambili be-ECN ukukunceda ukwahlula ingqolowa kumququ. Oku kunokufumaneka esiphelweni sesi sikhokelo!
Inyathelo lesibini -Vula iAkhawunti
Vula iakhawunti yorhwebo ngokugcwalisa ifom yobhaliso ngolwazi lwakho olusisiseko. Esi sisenzo esiqhelekileyo kuye nawuphi na umrhwebi.
Iinkcukacha zonxibelelwano, ezinje nge-imeyile kunye nenombolo yomnxeba
Ngenisa naluphi na ulwazi olufunekayo lwezemali okanye imbali yokurhweba (oku kuyokwahluka phakathi kwamaqonga ahlukeneyo)
Ngoku kuyakufuneka ungenise ubungqina bakho besazisi. Kwakhona, oku kuya kwahluka, kodwa ngokubanzi, kuya kufuneka uthumele ikopi yakho yokundwendwela okanye ikhadi lesazisi.
Abanye abathengisi be-ECN banokufuna ubungqina obongezelelweyo bokuba ungubani; njengebhili yokusetyenziswa, ityala lomnxeba okanye nayiphi na enye ileta esemthethweni enegama lakho nedilesi yokuhlala kuyo.
Isazisi sakho kunye neenkcukacha zakho ziya kujongwa ngokwemigaqo. Ngokwesiqhelo, uya kufumana isiqinisekiso malunga noku ngokukhawuleza.
Ukuba uziva ngathi kuthatha ixesha elide, akukho nto inokukuthintela ekunxibelelaneni neqela lenkxaso yabathengi le-ECN, kwaye baya konwaba ngakumbi ukuleqa ukulibaziseka kwakho.
Inyathelo lesihlanu - iiNgxowa-mali zeDiphozithi ziQala ukuRhweba
Ngoku kuya kufuneka ukwazi ukungena kwiakhawunti yakho, usete ukhetho oluthandayo lokuhlawula, kwaye ubeke imali. Ngokukhawuleza ukuba iakhawunti yakho ixhaswe ngemali, ungaqala ukurhweba kwangoko.
Njengengcebiso esecaleni, kufanelekile ukuba ujonge ukuba ngaba ikhona iakhawunti yedemo ye-ECN yokukunceda ufumane iinyawo zakho.
I-5 yee-ECN Brokers eziGqwesileyo zango-2021
Awunalo ixesha lokufumana i-ECN broker ngokwakho? Sukuba nexhala- njengoko thina sifunda kuRhwebo 2 benze wonke umsebenzi onzima ngenxa yenu!
Apha ngezantsi uyakufumana abarhwebi abahlanu abagqwesileyo be-ECN be-5 nangaphaya.
1. I-Forex.com.com- oMrhwebi oQhelekileyo ojikeleze i-ECN
I-Forex.com ngumrhwebi oyingcali wemali ekwabonelela ngezinye iiklasi zeeasethi. Oku kubandakanya iiCFD ngohlobo lwesitokhwe, izinto zorhwebo kunye nezalathiso. Kwinto ekubiza ngokuba yi-GTX ngqo, i-Forex.com ibonelela ngendawo yokurhweba ye-ECN ngokupheleleyo.
Oku kuthetha ukuba uyakuqhelana nemirhumo yokhuphiswano, ukusasazeka kunye neekhomishini. Ngaphezulu kwezibini ezingama-90 ze-forex ekunikezelweni, uya kuba nakho ukufikelela kukhetho olupheleleyo lweejors, abancinci, kunye nezinto zangaphandle. Into enomdla kukuba iqonga likuvumela ukuba uqalise ngobuncinci bediphozithi eyi- $ 50.
2. I-FXTM- Umrhwebi ogqwesileyo we-ECN kwiiKhomishini zeZero
I-FXTM ngumrhwebi okwi-Intanethi olawulwa yi-FCA kunye neCySEC. Uyakwazi ukuthengisa yonke into ukusuka kwi-forex, iimveliso, isinyithi kunye neesitokhwe- zonke ngohlobo lweCFDs. Iiakhawunti zayo ze-ECN zifuna idiphozithi encinci ye- $ 500, kwaye uya kuxhamla kwii-commissions zero kunye nokusasazeka okuqinileyo. Uya kuba ne-optoin yokusebenzisa amaqonga eqela lesithathu athandwayo iMT4 kunye neMT5.
3. Iimakethi zePepperstone- Elona qonga liphezulu lokurhweba kwi-ECN
Pepperstone Iimakethi yindawo eyaziwayo yokuthengisa kwi-intanethi enika ii-akhawunti ze-STP kunye ne-ECN. Uya kuba nokufikelela kwisuti epheleleyo yamaqonga orhwebo- kubandakanya iMT4, MT5, cTrader, kunye neZuluTrader.
Oku kulungele abo bafuna ukufundwa kwetshathi kunye nokudweba izixhobo, kunye nokukwazi ukuhambisa iirobhothi ezizenzekelayo. Yamkela iindlela ngeendlela zokuhlawula, ezinje nge-debit / ikhadi lekhredithi, i-Paypal, kunye nokudluliselwa kwebhanki. Ukukhusela ibhalansi engalunganga xa kunikezelwa, kwaye ungazibandakanya kokuklanywa kunye nokujijiswa ngaphandle kokukhathazeka.
4. Cinga iimakethi- Eyona i-ECN Broker yoPhuculo oluPhezulu
Cinga iimakethi ngumrhwebi okwi-Intanethi ophethe iilayisensi ezininzi zokulawula. Oku kubandakanya-kubandakanya i-FCA. Phakathi kwezinye iintlobo zeakhawunti, iiMarket zokuCinga zikwabonelela ngeakhawunti ye-ECN. Lo broker uyathandwa ngabarhwebi abafuna ukufikelela kwimida ephezulu yokuphakamisa. Oku kumi kwi-whopping 1: 500 ukuba ungumthengi oqeqeshiweyo.
5. Robo Forex -Iakhawunti ze-ECN nge-0 eziSasazekayo
URobo Forex liqonga lokurhweba kwi-Intanethi elibonelela ngeakhawunti ye-ECN. Ungaqala ngemizuzu, kwaye ubuncinci beedipozithi ziqala kwi- $ 10 nje. Eyona nto ibaluleke kakhulu, awuyi kuqhelana nokusasazeka xa uthengisa nge-akhawunti yakho ye-ECN. Iqonga likhaya kumanqanaba aphezulu okuhlawula amatyala kunye nokukhawulezisa ukwenziwa ngokukhawuleza.
Ndiyabulela ekusebenzeni ngokurhweba okuphezulu kunye neemeko zorhwebo, sicinga ukuba umthengisi we-ECN wenza ukuba abathengisi abanamava bangene kwizikhundla ngokutyibilikayo, kodwa okona kubaluleke kakhulu - kunenzuzo enkulu.
Ngokusika umntu ophakathi kukho ukucaca okungakumbi. Kwaye ngokususwa kongquzulwano lwezinto onazo, abarhwebi abaphambili beECN bajongwa ngokubanzi njengeyona ndlela ithembakeleyo nekhuselekileyo yokuthengisa. Kungenxa yokuba umrhwebi wakho we-ECN uza kwenza ikhomishini nokuba ulahlekelwe yimali okanye wenze inzuzo.
Ngalo lonke ixesha khumbula, ii-broker ezilawulwayo kufuneka zihambelane nezibophelelo ezingqongqo kunye nemithetho xa kufikwa kukhuseleko lweemali zakho zorhwebo. Ngale nto engqondweni, ukuba umthengisi wakho we-ECN ulawulwa lilayisensi enye okanye nangaphezulu, umzimba-uyazi ukuba usezandleni ezikhuselekileyo. Kananjalo, thina kwi-Learn 2 Trade soze sincome umrhwebi ongalawulwayo kwiwebhusayithi yethu.
Ngaphambi kokuba wenze isigqibo sokugqibela ukuba loluphi uhlobo lomrhwebi ongathanda ukulusebenzisa, kubalulekile ukuba wenze uphando. Akukho babarhwebi banye abalinganayo, kwaye iimveliso zabo kunye neenkonzo ekunikezelwayo ziya kuyahluka kancinci.
Idiphozithi encinci njenge- $ 10 ukuqala ukurhweba
Iikhomishini eziphantsi kakhulu kunye nokusasazeka okuqinileyo
I-forex yorhwebo, i-crypto, iimveliso kunye nee-indices
$10 Idiphozithi encinci
Iimarike ezinamanzi amaninzi ukuze wenze okuninzi kokungazinzi
Lawula urhwebo lwakho kwiziseko zethu ezikhuselekileyo nezifihliweyo
Ngena kwiimarike ngemali encinci njenge- $ 100
$500 Idiphozithi encinci
Ngaphezulu kweemarike ezingama-4,500 kubandakanya iFX, izabelo, ii-cryptos, ii-indices kunye nezinto zorhwebo
Fumana izaphulelo kwivolumu yorhwebo yenyanga xa ulungele ukurhweba ngokuSebenzayo
Amaxabiso aphantsi okurhweba kwiimarike ze-crypto *